Kulan uu isugu yimid Baarlamanka dowlad Afrikaan ah oo ku dhamaaday feer iyo Laad (Daawo Sawirro) | kowtharmedia.com
Home WARAR Kulan uu isugu yimid Baarlamanka dowlad Afrikaan ah oo ku dhamaaday feer iyo Laad (Daawo Sawirro)
Kulan uu isugu yimid Baarlamanka dowlad Afrikaan ah oo ku dhamaaday feer iyo Laad (Daawo Sawirro)
Kulan uu shalay isugu yimid baarlamanka dalka Koonfur Afrika ayaa ku dhamaaday Feer iyo laad ka dib markii mucaaradka ay is hortaageen khudbad uu madaxweyne Jacob Zuma ka jeedin lahaa.
Mr Zuma ayaa laba jeer istaagay masraxa oo isku deyay inuu hadalka billaabo, laakiin xildhibaanada mucaaradka ayaa ku buuqay oo u diiday inuu kalmad jeediyo, waxaana laga dalbaday inuu is casilo.
Madaxweynaha ayaa Markii uu galayay dhismaha baarlamaanka shalay, waxaa lagu soo dhoweeyay ereyo qeylo ah “Tuug”. Iyadoo six un loogu oriyay Madaxweynaha.
Xildhibaanada ka tirsan xisbiga talada haya ee ANC ayaa dhankooda ku qeylinayay “ANC, ANC, ANC” iyagoo difaacaya madaxweynaha.
gudoomiyaha baarlamaanka dalkaas Baleka Mbete ayaa isku deyday inay rabshada la tacaasho, balse way awoodi waysay iney joojiso buuqa iyo qalaalasaha.
Hase ahaatee Gudoomiyaha baarlamaanka waxaa u loogu jawaabay “Anshaxaaga wuu xun yahay. Waxaa tahay qof aan dhameystirneyn, oo degdegaaya, dhexdhexaadna ma ahid”.
Jacob Zuma ayaa ka careysiiyay qaar ka mid ah xildhibaanada ka dib markuu amray in 440 askeri la geeyo dhismaha baarlamaanka ka hor intuusan gaarin oo uusan billaabin khudbada, iyadoo Mucaaradka ay tallaabadaasi ku tilmaamay shaacin dagaal.
Previous PostDAAWO MUUQAAL: Khaladaadka ay galaan Hawlwadeenada diyaaradaha xilliga ee ku jiraan Hawadda!! Next PostCaqabado ka jira Xaflada qaban qaabada caleema saarka Madaxweyne Muxamed Cabdullaah Farmaajo + warbixin!!